बच्चालाई घरबाट लिन आएका स्कुल बस ड्राइभरले गरे घिनलाग्दो काम, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बच्चालाई घरबाट लिन आएका स्कुल बस ड्राइभरले गरे घिनलाग्दो काम
बैंगलोर। कर्णाटक राज्यमा एक नामी सकुलका सकुल बस ड्राइभरलाई एक मशिलाको अपत्तिजनक भिडियो बनाएको र पछि त्यसलाई इन्टरनेटमा अपलोड गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको छ । ती ड्राइभरले अरु कसैको नभइ आफैंले बसमा ओसार्ने गरेका उक बालककी आमाको भिडियो बनाएका थिए । ती ड्राइभर सधैं बालकलाई स्कुल लैजानको लागि लिन घर जाने गर्थे । यही क्रममा उनले मौकाको फाइदा उठाएर भिडियो बनाए र महिलालाई ब्ल्याकमेल गर्न थाले ।
घटना बैंगलोरको हेग्गानहल्लीको हो । यहाँकी ३४ वर्षकी पीडित महिलाले घटनाको उजुरी दर्ता गराएकी हुन् । उनका छोरा आंध्रहल्ली मेन रोडको एक नामी स्कुलमा पढ्छन् । महिलाका अनुसार बालकलाई लिन र छोड्नको लागि स्कुल बस आउँछ । यही क्रममा एक दिन ड्राइभर घरमा आए र उनले महिलाले नुहाइरहेको भिडियो बनाए । त्यसपछि एक वर्षदेखि ती ड्राइभर भिडियोका आधारमा उनलाई ब्ल्याकमेल गरिरहेका थिए ।
महिलाका अनुसार एक दिन ती ड्राइभर नशाको हालतमा महिलाको घरमा पनि पुगे । त्यसपछि महिलाका पति र घर मालिकले ड्राइभरलाई गाली गरेर पठाए र फेरि यस्तो नगर्न चेतावनी पनि दिए । तर, उनीहरुलाई भिडियो र ब्ल्याकमेलको बारेमा जानकारी थिएन । यो कुरा त्यतिबेला खुल्यो जब ती ड्राइभरले नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर महिलाको आपत्तिजनक भिडियो र फोटो त्यसमा अपलोड गरिदिए । भिडियो बाहिरिएपछि परिवारले प्रहरीमा उजुरी गरे त्यसपछि आरोपी पक्राउ परेका हुन् ।